स’न्तानको नाममा भएकी एउटी छोरीलाई लाग्यो यस्तो गम्भी’र रोग, आमा छोरीको रु;वाबासी-हेर्नुहोस् ( भिडियो) – Ap Nepal
स’न्तानको नाममा भएकी एउटी छोरीलाई लाग्यो यस्तो गम्भी’र रोग, आमा छोरीको रु;वाबासी-हेर्नुहोस् ( भिडियो)
काठमाडौ । श्रीमान पनि धेरै विरामी छन् । श्रीमानकै उपचार गर्न पनि पैसा छैन । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी यि महिलालाई नै फेरी अर्को बज्रपात परेको छ । काखमा भएकी छोरी पनि अस्वस्थ्य भएपछि उनी भौतारिदै हिडेकी छन् ।
छोरीलाई उनले डाक्टरसंग देखाइन्, डाक्टरले भनेको कुरा सुनेर आमाको झन होस उडेको छ । छोरीलाई निको बनाउने हो भने हजार पटक सम्म पनि शल्यकृया गर्न पर्छ भनेका छन् । उनी सानैमा निकै राम्रो बोल्थिन् तर अहिले उनको आवाज छैन ।
लामो समय उपचार गर्दा पनि निको नभएपछि उनले छोरीलाई काठमाडौ शिक्षण अस्पतालमा लगिन् । घाँटीमा निकै ठूलो मासु पलाएको रहेछ । त्यो शल्यकृया गरेपछि छोरी बोल्न थालिन् । तर ६ महिनामा फेरी त्यो रोग बल्झियो । यसरी पटक पटक गरेर ६ पटक शल्यकृया भइसक्यो । तर अहिले झन छोरीको आवाज पनि गुमेको छ ।
झण्डै ६ लाख भन्दा बढी खर्च भैसकेपनि निको नभएपछि उनले चिकित्सकलाई सोध्दा तपाईको छोरीलाई हजार पटक पनि शल्यकृया गर्नुपर्छ भने, छोरी १८ वर्षको उमेर हुँदा सम्म यसरी नै शल्यकृया गर्न पर्छ भन्छन्, उनले रुँदै भनिन्, मसंग यो सानो झुपडी बाहेक केही छैन ।
अब म कसरी छोरीको हजार पटक शल्यकृया गर्ने ? छोरीको उपचार त सम्भव छ तर त्यसका लागि भारत लैजानुपर्छ भनेका छन् तर पैसा भने छैन । घरमा बेच्ने कुरा पनि छैन अब कसरी उपचार गरुँ ? उनले विलौना गर्दै भनिन् ।
Prevनायिका स्वेता खड्का नाच्दै श्रीमानलाई भनिन् “म हजुरलाई मायाले रू;वाईदिन्छु”-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
Nextश्वेताकी जेठानी दिदी छिन्: श्वेता जस्तै निकै राम्री, श्वेताकी सासुले दुवै बुहारीलाई मेरा रानीजस्ता छोरी भनेपछि दुवै म’क्ख (हेर्नु;होस् भिडियो)
काठमाडौं आʼ उँदै गरेको गाडीमा डेढ करोड रुपैयाँ भेटिʼयो
जंगलमा छट’पटाएको भिडियो खिचेर टिक-टकमा हालिदिने महिला मिडियामा -यस्तो रहिछ वास्तविकता (भिडियो हेर्नुहोस)